gaziantep escort beylikdüzü escort မူဝါဒဆိုင်ရာများ | Environmental Conservation Department
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာအတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ
DSO Entrance Form.pdf
Global Green Growth Institute (GGGI) မှ Senior Officer, Green Cities Project Lead အတွက် Waste Management and Sanitation Consultant, Transport Consultant, Infrastructure and Housing Consultant, Energy Consultant များခေါ်ယူမည...
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၆ ရက် (စနေနေ့) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး၊ အငယ်တန်းစာရေးနှင့် စာရင်...
Written Result (147).pdf
နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်းစီမံကိန်း (Technical Needs Assessment – TNA Project) အတွက် အမျိုးသားအကြံပေးခေါ်ယူခြင်း
ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ (Global Environment Facility-GEF)၏ ရန်ပုံ​ငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ဒိန်းမတ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်းစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ရာသီ...
Call for Consultant website.pdf
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအား ခေါ်ယူခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀) အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းသစ်ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လျှောက်လွှာပုံစံ PDF ကို download လုပ်ယူ၍ လျှောက်...
Entrance Form (Website declare).pdf
National Environmental Quality (Emission) Guidelines (Final)
National Environmental Quality (Emission) Guidelines (Final).pdf
Myanm ar' s Intended Nationally Determined Contribution-INDC